Alaab -hayaha hanger -warshad iyo Warshadda - Soo -saareyaasha hangar warshad
Birta Minimalist -ka ee baaskiilka cad -gooyaha cad cad
Weelka quudinta eey oo aan sinnayn
Qaybta warshad hayaha birta
Naqshadeynta biraha xarrago leh ee laambadda sudhan，warshad, guri shimbir，dabaysha iwm.
Qalab: Waxaa laga sameeyay 100% biraha birta oo tayo sare leh, oo leh dusha sare ee aan miridhku lahayn iyo dhismo adag, xidhmooyinkan gidaarku waa mid waara oo xarrago leh. Waxay ku habboon tahay in la sudho dhirta gudaha iyo dibaddaba.
Qurxinta Guriga: Naqshadeynta jillaabyada hangar -ka -goosadka ee geedka canabka ah wuxuu ku darayaa taabashada qaabka rustic -ka gelitaanka, barxadda, beerta, qolka fadhiga, qolka cuntada iyo meel kasta oo dibadda ah
Si sahlan loo rakibo ：Qaboojiyaha geedka Intpro oo kaliya adigoo isticmaalaya daloolin iyo makiinad, ku dheji darbiga qallalan ama darbiga derbiga oo leh isku xiraha isku midka ah. Waxay si fiican ugu habboon yihiin nooc kasta oo darbiyo ah, sida darbiga qallalan iyo darbiga derbiga. La dheereeyey.
Fudud oo dhinacyo badan leh：Qaboojiyaha tayada sare leh ee geedka sudhan ayaa ah qabsatooyin ku habboon dabaysha dabaysha, dheriyada ubaxa, nalalka xadhigga, siraad, qurxinta shimbiraha, dhirta dheriga ama mashaariic kale oo DIY ah, hangarrada dhirta adag ee lagu dhejiyo beeralayda gudaha & dibadda
24 Saacadood Ka Dib Jawaabta Iibka：Intpro waxay ku siin kartaa waayo-aragnimada macmiilka ugu fiican iyo adeegga iibinta kadib. Fadlan hubso inaad iibsato, adeeggayaga macaamiisha ayaa xallin doona dhibaatadaada 24 saacadood gudahood. Kaliya iibso si kalsooni leh!
Cabbirka: 6 ”L, 8” L.10 ”L.12” L, 18 ”L ama la habeeyay.
Dhammaad: Powder dahaarka leh ee matte madow leh.
Si sahlan loo rakibo: Wuxuu la yimaadaa boolal dhajinta iyo barroosinka. Jillaabyada beertu waxay ku habboon yihiin tiirarka xayndaabka alwaaxyada, dhejiska sagxadda, ama xitaa derbiyada gudaha. Talooyinka qaloocan waxay caawiyaan walxaha sugan.
Si Weyn Loo Isticmaalo: Aad bay ugu fiican tahay in la sudho nalalka cadceeda, dhalooyinka dhagaxa samon, dambiilayaasha ubaxa samll, silsiladda roobka, guryaha shimbiraha, qurxinta fasaxa.
Qalabka Weyn ee qolkaaga fadhiga, musqusha, qolka jiifka, albaabka laga soo galo, barxadda, balbalada, beerta, xayndaabka sagxadda alwaaxda ee meel kasta oo bannaanka ah oo gudaha ah.
Warshad bir ah oo la isku qurxiyo, laambad, hanger -ka dabaysha.
Qalab: Qoorta birta ah ee laalaada ee Balanbaalis waxay ka samaysan tahay bir tayo sare leh oo lagu daboolay budo madow, waxay ka soo horjeedaan miridhku waxayna leeyihiin nolol adeeg dheer. Tayada sare waxay ka dhigtaa mid adag oo dhammaystirka madow wuxuu ka dhigayaa meeshaad ku nooshahay mid xarrago leh oo ku habboon wax kasta oo ka laalaada.
Logo: Astaanta la habeeyay ayaa la heli karaa.
Midabka: Midabada Madow ama La -habeeyay.
Baakadaha: Baakado ammaan ah, baakad sanduuq bunni ah, baakad sanduuq midab leh ama baakad la habeeyey.
Waqtiga Sample: 5-7 maalmood.
Waqtiga wax soo saarka: Sida caadiga ah 15-20 maalmood. Wakhtiga wax -soo -saarku waa gorgortan.
Shixnad: diyaarad, bad iyo tareen.
Dekadda FOB: dekedda Guangzhou /dekedda Shenzhen.
Shuruudaha lacag -bixinta: TT/Paypal/Western Union ama shuruudaha lacag -bixinta oo la gorgortamay.
Way fududahay in la rakibo: Qalabka rakibidda waxaa ka mid ah, si fudud u laallaada beerahaaga, dambiilayaasha ubaxa iyo qurxinta beerta kale iyadoo la kaashanayo qaybta geedka.
Qurxinta Guriga: Ku dar muuqaal soo jiidasho leh gurigaaga ama beertaada oo leh buug -gacmeedyada duugga ah ee loogu talagalay qaybta birta.
Qaansada dhirta adag: Barkeedu wuxuu ka dhisanyahay bir bir ah oo waarta, budo dahaarka leh oo dahaarka leh ee iska caabbinta miridhku ka sarreeyo, waxay ku darsataa taabashada xarrago dayr kasta.
OEM & ODM: Waxaan samaynaa dhammaan alaabooyinka birta ee la habeeyay. Waxaan leenahay koox naqshadeysan oo xirfad leh oo abuuri kara naqshado iyadoo loo eegayo fikradaha macaamiisha. Kaliya noo soo sheeg haddii aad wax fikrad ah maskaxdaada ku hayso. Waxaan ka dhigi doonaa fikirkaaga mid run ah.
Qaansada biraha Dayaxa & Bisadda ee warshad sudhan, siraad, guri shimbir, dabaysha dabaysha.
l CAT & Dayax gacmeedka biraha naqshadeynta laambad la sudhay, warshad, guri shimbir， dabaysha iwm.
l Tayada Qancinta: Walxaha birta lagu farsameeyay ee farsamada gacanta waxay hubisaa miridhku inuu adag yahay oo adag yahay. Ma midabayn doono, wuxuuna u adkaysan karaa nabaad -guurka roobka, barafka iyo iftiinka qorraxda.
l Ujeedo Badan: Ku qurxi gurigaaga ama beertaada adigoo sudhan quudiyaha shimbiraha, faynuusyada, kuwa wax beerta, dheriyada ubaxa, qurxinta fasaxa, nalalka xarigga, dabaysha dabaysha, qurxinta, iyo qaar kaloo badan!
l Waxyaabaha: steel carbon
l Cabbirka: 6 ”L, 8” L.10 ”L.12” L, 18 ”L ama la habeeyay.
l Dhammee: Dufanka dahaarka leh ee matte raagaya.
l Logo: Astaanta la habeeyay ayaa la heli karaa.
l Midabka: Midabyo Madow ama La -habeeyey.
l Baakadaha: Baakado ammaan ah, baakad sanduuq bunni ah, baakad sanduuq midab leh ama baakad la habeeyey.
l Waqtiga Sample: 5-7 maalmood.
l Waqtiga wax soo saarka: Sida caadiga ah 15-20 maalmood. Wakhtiga wax -soo -saarku waa gorgortan.
l Shixnad: hawada, badda iyo tareenka.
dekedda FOB: dekedda Guangzhou /dekedda Shenzhen.
l Shuruudaha lacag -bixinta: TT/Paypal/Western Union ama shuruudaha lacag -bixinta oo la gorgortamay.
l Way fududahay in la rakibo: Wuxuu la yimaadaa boolal dhajinta iyo barroosinka. Jillaabyada beertu waxay ku habboon yihiin tiirarka xayndaabka alwaaxyada, dhejiska sagxadda, ama xitaa derbiyada gudaha. Talooyinka qaloocan waxay caawiyaan walxaha sugan.
l Stylish: Garabka dhirta tooska ah ee Minimalist wuxuu bixiyaa muuqaal soo jiidasho leh. Dhamaad cad ama madow ayaa si la yaab leh u dhammaystira wax kasta oo ka laalaada, kuna daraya xarrago iyo qurux gurigaaga ama beertaada. Muraayadaha cad/madow ee iswaafajiyaa waxay ilaaliyaan muuqaal joogto ah, oo qurux badan.
l Adeegga Iibinta Kadib: Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto alaabtayada, fadlan si fudud nala soo xiriir. Waxaan kuugu adeegi doonaa qalbi dhan. Waxaana rajaynaynaa inaad dukaankayaga ku yeelan doonto waayo -aragnimo wax -iibsi oo wanaagsan.
l OEM & ODM: Waxaan samaynaa dhammaan alaabooyinka birta ee la habeeyay. Waxaan leenahay koox naqshadeysan oo xirfad leh oo abuuri kara naqshado iyadoo loo eegayo fikradaha macaamiisha. Kaliya noo soo sheeg haddii aad wax fikrad ah maskaxdaada ku hayso. Waxaan ka dhigi doonaa fikirkaaga mid run ah.
Ku saabsan annaga: Xirfaddayadu waa GOOYIN LAASER. Waxaan soo saarnaa nooc kasta oo alaab bir ah. SHENGRUI waxay bixisaa badeecado heerkoodu sarreeyo iyo adeeg hufan kadib iibinta. Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid alaabtayada, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal sida ugu dhakhsaha badan.
Qaansarka dhirta ee Balanbaalis Held warshad birta ah
Cabbirka: 6 ”L, 8” L, 10 ”L, 12” L, 18 ”L ama cabbirrada la habeeyay.
Qalab: Bir tayo fiican leh
Way fududahay in la rakibo: Qayb kasta waxay la timaadaa boolal dhajinta iyo barroosinno. Furaha biraha ayaa si qumman oo fudud u qaniini kara qoryaha ama derbiga, markaa kaliya hel dusha sare oo waxaad bilaabi kartaa qorshahaaga qurxinta.
Ujeeddo badan: U fiican laalaadda nalalka cadceeda, dhalooyinka dhagaxa, dambiisha ubaxyada yar yar, silsiladda wain, guryaha shimbiraha, iyo qurxinta fasaxa.
Qalab weyn oo loogu talagalay qolka fadhigaaga, musqusha, qolka jiifka, albaabka laga soo galo, barxadda, balbalada, beerta, xayndaabka sagxadda alwaax ee gadaashiisa iyo meel kasta oo dibadda ah oo gudaha ah.
Annaga nagu saabsan: Xirfaddeennu waa JOOJINTA LAASER. Waxaan soo saarnaa nooc kasta oo alaab bir ah. SHENGRUI waxay bixisaa badeecado heerkoodu sarreeyo iyo adeeg hufan kadib iibinta. Haddii aad wax su'aal ah ka qabtid alaabtayada, fadlan nala soo xiriir. Waxaan ku siin doonaa xal sida ugu dhakhsaha badan.
Naqshadaynta biraha BIRD ee foornada sudhan, warshad, guri shimbir,dabaysha iwm.
Qalab: Qoladan birta sudhan ee birta Bird ka samaysan ayaa ka samaysan bir tayo sare leh oo lagu daboolay budo madow. Waxay ka soo horjeedaan miridhku waxayna haystaan ​​nolol adeeg dheer. Tayada sare waxay ka dhigtaa mid adag oo dhammaystirka madow wuxuu ka dhigayaa meeshaad ku nooshahay mid xarrago leh oo ku habboon wax kasta oo ka laalaada.
Block C Zongxin Park Warshadaha Shijie Hengjiao Shijie Dongguan 52301 Shiinaha
Qabatooyinka Furaha Furaha, Hanjabaadda Dheriga Dhirta, Qabanqaabiyaha Hook Furaha, Farshaxanka Darbiga Birta, Coat Hanger Rack Hooks, Qaansarka Warshada Darbiga,